CHE is not Dead (June 14/2021) – PVTV Myanmar
နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “ပညာဖြင့်တော်လှန် နွေဦးရဲ့အောင်လံ” ရန်ပုံငွေ​ေ Virtual Live Show ပွဲမှာ David Lai ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ “The Last Battle” အမည်ရသီချင်းကို ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Min Myat Phone Shan says:
2021-06-14 at 1:16 PM
bagyi shein says:
2021-06-14 at 1:36 PM
Thu Ta Aung says:
2021-06-14 at 2:01 PM
There are Many Che in Burma……
2021-06-14 at 5:39 PM
ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် အသံနဲ့တူတယ်နော်.. အားပေးတယ် ဗျာ.
myohtet yao says:
2021-06-14 at 6:59 PM
Ta Moaye says:
2021-06-14 at 9:12 PM
2021-06-14 at 9:15 PM
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။💪💪💪💪💪✊✊✊✊ စစ်အာဏာရှင် မုချကျဆုံးရမည်။
Sein Myint says:
2021-06-15 at 10:16 AM
Nay Phyo Wai says:
2021-06-16 at 7:54 AM
Please, Sir. Could you create CHE's biography…? At this time you should tell about him…we must absolutely win in spring revolution…….
Myat Loon says:
2021-06-17 at 10:07 PM
မြန်မာပြည်မှ ( ချေ ဂွေ ဗား ရား ) ပြည်သူများ —
အ‌ ရေး တော် ပုံ အောင် ရ မည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီ…